chitnge | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | Page 2
I hereby declare that the goal of Buddhists (Nirvana) is not equivalent to Black Hole. There are some relations between Nirvana and Black Hole like when someone goes into the black hole, he will be reached to the end of the … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged (၃၁)ဘုံ, BLACK HOLE, Buddhism and Science, Magga Nyanna, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
Posted on July 17, 2013 by chitnge
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု အပိုင်း(၃၀) ဆရာမြတ်ကြီးပို့ပေးတော်မူခဲ့သော မြန်မာပြည်ရှိတန်ခိုးကြီးဘုရားများ ဆရာမြတ်ကြီးသည် စာရေးသူတို့ တပည့်သားသမီးများ ကို တန်ခိုးကြီးဘုရားတော်တော်များများ ပို့ခဲ့ဖူးပါသည်။ ယင်းတို့ထဲတွင် မင်းဘူးရွှေစက်တော်၊ ပြည်ရွှေဆံတော်၊ မကွေးမြသလွန်၊ ယခု ကျိုက္ခမီရေလည်ဘုရား၊ ရွှေတိဂုံ၊ ကျိုက်ထီးရိုး၊ စစ်ကိုင်းတော်ဘုရားများအပါအ၀င်၊ တန်ခိုးကြီးဘုရားများ၊ နာမည်ကြီးဒေသ တော်တော်များများကို ဆရာမြတ်ကြီးက ပို့ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆရာမြတ်ကြီးသည် အမျှော်အမြင် လွန်စွာ ကြီးမားတော်မူရာ စာရေးသူတို့နောင်အနာဂတ်၊ စာရေးသူအဖို့တော့ ယခုထက်တိုင်ပေါ့ . . . အကျိုးရှိစေသော ဌာနများကို အသေအချာရည်ရွယ်၍ အပင်ပန်းခံကာ ပို့ပေးခဲ့ပါသည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ဆရာမြတ်ကြီး	| Leaveacomment
Dr Chit Nge Myawaddy Interview
Posted on June 15, 2013 by chitnge
*Video: dr chit nge myawaddy interview No tags for this post.
Posted on June 8, 2013 by chitnge
လူ့အခွင့်အရေး (ကျွန်တော်၏သီးခြား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ သို့မဟုတ် စာရေးသူ၏ သီးခြား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်) လူ့အခွင့်အရေးဆိုသော စကားလုံးကို တော်တော်များများ သုံးစွဲကြသည်။ အသီးသီးမိမိတို့၏ ခံယူချက်နှင့် မိမိတို့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုကြမည်သာ ဖြစ်သည်။ စာရေးသူ၌လည်း အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် ရှိသည်။ ယင်းကိုဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်။ စာရေးသူ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို မဖော်ပြမီငယ်စဉ်က တွေ့ကြုံမှတ်သားခဲ့သော အမေးသုံးခုနှင့် အဖြေသုံးခုကို တင်ပြလိုပါသည်။ Tags: Buddhism, ဗုဒ္ဓဘာသာ
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, ဗုဒ္ဓဘာသာ	| Leaveacomment
Posted on May 27, 2013 by chitnge
နိဗ္ဗာန်၏ ဂုဏ်ရည်များ နိဗ္ဗာန်၏ ဂုဏ်ရည်များ ကို မကြာခဏ တင်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတခါ တင်ပြရတာကတော့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို လေးစားလို့ပါပဲ။ လေးစားလို့ဆိုတာ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေကို တင်ပြလိုက်တာနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးက ဂုဏ်ရည်ရှိတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ရှိမှာပဲလို့ ယုတ္တိနည်းကျ နိဂုံးဆွဲနိုင် ရေလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်မှာ ဂုဏ်ရည်တွေရှိပါတယ်။ နိပုဏ၊ အစ္စရိယ၊ အမ္ဘုတ၊ ၀ိဝေက၊ အနိဒဿန စသည်ဖြင့် ပေါ့။ (ပါဠိလိုသုံးတာကတော့ ခွင့်ပြုပါ)။ သေသေချာချာ သိစိမ့်သောငှာ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်းပါပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်က နုညံ့တယ်၊ သိမ်မွေ့တယ်၊ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
Webinar Invitation : Buddhism and Scientific Knowledge
Posted on July 24, 2012 by chitnge
The webinar is about to start Title : Buddhism and Scientific Knowledge Please visit http://anymeeting.com/drchitnge1 Tags: Buddhism
Posted in Buddhism & Science, Seminars	| Tagged Buddhism	| Leaveacomment
Posted on July 23, 2012 by chitnge
A Seminar (also Webinar) will be held at IBC tomorrow morning at 09:00 AM (Myanmar Time) by Dr Chit Nge. Title : “Buddhism and Scientific Knowledge” Venue: International Business Center (Pyay Road) Date : 24th July 2012 Time : 09:00 … Continue reading →
MRTV4 မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော နိဗ္ဗာန်ဆီသို့ . . . ဆွေးနွေးခန်း အမေးအဖြေများ
Posted on March 18, 2012 by chitnge
ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ် (ဒဿန)၏ MRTV-4 မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ဆွေးနွေးခန်းအမေးအဖြေ MP3 များ ကို အပိုင်းလိုက် တင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Admin Part(1) Part(2) Part(3) Part(4) Part(5) Part(6) Part(7) Part(8) Part(9) Part(10) Part(11) Part(12) Part(13) Part(14) Part(15) Part(16) Part(17) Part(18) Part(19) Part(20) Part(21) Part(22) Part(23) Part(24) Part(25) Part(26) … Continue reading →
Posted in Audio, Buddhism	| Tagged နိဗ္ဗာန်ဆီသို့ MP3	| Leaveacomment
တရားရှာခန္ဓာမှာတွေ့ ဟောပြောပွဲအခမ်းအနား Live at IBC, 2.29.2012 (2:00 – 5:00 PM)
Posted on February 29, 2012 by chitnge
Posted in Buddhism, Seminars	| Leaveacomment
A Brief Biography of Dr. Chit Nge
Posted on February 25, 2012 by chitnge
About the highest triumph of human knowledge
Posted on February 20, 2012 by chitnge
Human beings are trying to search knowledge. It might be the knowledge of facts or may be the knowledge of relation between facts. They are searching for true knowledge all the time, so to speak. But, in those days, Scientists, … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Nibbana	| Leaveacomment
ကြောင်းကျိုးသိလျှင် ဒိဋ္ဌိသေမည် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနား @ IBC, Pyay Rd, 20.2.2012
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လက်တွေ့ကျင့်ကြံသောအခါ အသိပညာရနိုင်ပါသည် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနား Live @ IBC (30, Jan 2012)
Posted on January 30, 2012 by chitnge
Live Photo updates available at Dr Chit Nge’s Facebook Page http://www.facebook.com/DrChitNgePhilosophy No tags for this post.